बाबुरामले मदन भण्डारी सम्झिदै भने पत्नी राष्ट्रपति, उत्तराधिकारी प्रम हुँदा रहस्य खोजौ
काठमाडौ । आज जेठ ३ अर्थात् मदन भण्डारी–जीवराज आश्रित स्मृति दिवस । आज जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधन भएको २८ बर्ष पुगेको छ । यो अझै रहस्यमय नै छ ।
यसै घटना पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मदन भण्डारी सम्झिदै भने रहस्यमय मृत्युवरण मदनपत्नी राष्ट्रपति र उत्तराधिकारी दावी गर्ने प्रधानमन्त्री भएको बेला निर्क्योल गरौ भनेका छन् ।
उनले लेखेका छन् २०५० जेठ ३ गते दासढुंगामा रहस्यमय मृत्युवरण गर्नुभएका नेताहरू मदन–आश्रितप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन । मदनपत्नी राष्ट्रपति र मदनको उत्तराधिकारी दावी गर्ने प्रम भएको बेला उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानवीन गरेर त्यो रहस्यको अन्तिम निर्क्योल गरौं । नत्र वहॉहरूको नाउॅमा स्वार्थको रोटी सेक्न छोडौं ।
मदन र जीवराजलाई आफ्नो आदर्श नेता मान्ने नेकपा एमाले लगायतले हरेक बर्ष मृत्यु भएको दिन स्मरण गर्दछन् । एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख आश्रितको २०५० जेठ ३ गते आजकै दिन दासढुंगामा भएको जीप दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको थियो ।
मदन पत्नी विद्या भण्डारी राष्ट्रपति र उनका समकालीनले यतिबेला सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । तर, २८ वर्षअघिको रहस्मय जीप दुर्घटनाको तथ्य अहिलेसम्म सतहमा आउन सकेको छैन ।
जिप त्रिशूली नदीमा खसेर दुर्घटना हुँदा भण्डारी र आश्रितको मृत्यु भएको थियो भने जीप चालक अमर लामा भने बाँच्न सफल भएका थिए ।
पोखरामा हुने सभालाई सम्बोधन गर्न जाँदै गर्दा चितवनको कविलासस्थित दासढुंगामा दुर्घटनामा परेर दुवै नेताको निधन भएको थियो । विचार, वाकपटुता लगायत कारणले चर्चित नेता भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) विकास गरेका थिए ।
२०५०जेठ३गते दासढंुगामा रहस्यमय मृत्युवरण गर्नुभएका नेताहरू मदन-आश्रितप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन! मदनपत्नी राष्ट्रपति र मदनको उत्तराधिकारी दावी गर्ने प्रम भएको बेला उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानवीन गरेर त्यो रहस्यको अन्तिम निर्क्योल गरौं। नत्र वहाॅहरूको नाउॅमा स्वार्थको रोटी सेक्न छोडौं! pic.twitter.com/FLWKb1bqSi
— Baburam Bhattarai (@brb1954) May 17, 2021
बजार क्षेत्रमै बाढी पस्यो, हजारौँ परिवार कति भागेर बाँचे कति परे भन्न सकिने अवस्था छैन
साँझपरेपछि बजार बगरमा परिणत, शसस्त्र प्रहरीको ब्यारेक बगायो, कयौँ स्थानीय बेपत्ता
जनताको जीउ धन र सीमा रक्षा पहिलो प्राथमिकता, मित्रवत् रुपमा सीमा विवाद समाधान : गृहमन्त्री
प्रदेश नं १ को रु.३२ अर्व ४६ करोड ९२ लाखको बजेट विनियोजन
निषेधाज्ञामै कर उठाउन सरकारलाई सर्वोच्चले बाटो खोलिदियो, कर उठाउन थालियो तयारी
लुम्बिनीको बजेट रु ४० अर्बः स्वास्थ्य क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाका लागि तोक्यो सर्वोच्च बारले एमीकस क्युरी
निर्माण व्यवसायविना समृद्धिको कल्पना सम्भव छैन : अर्थमन्त्री पौडेल